Banyere Anyị - Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd., nke e guzobere na 2011, bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na-ekpuchi mpaghara nke ngwaahịa ahịhịa. Ngwaahịa anyị bụ ahịhịa artificial maka Landscaping na football / bọọlụ ubi. anyị na-enyekwa ngwaahịa ndị ọzọ gbasara mpaghara ndị a kpọtụrụ aha n'elu, dị ka teepu nkwonkwo, akara akara ọkụ, granulu roba, wdg.
Dịka ụlọ ọrụ na-ebupụ ebupụ, anyị na-ejikwa ngwaike dị iche iche na akụrụngwa ụlọ, dị ka ọkpọkọ gburugburu na tubes, mpempe akwụkwọ aluminom, PPGI / galvanized coils, ntupu waya, mbọ, kposara, waya waya, wdg.
Taa, a na-ebupụ ngwaahịa anyị niile n'akụkụ ụwa niile, dịka North America, South America, Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, na Africa.
Ebumnuche anyị bụ inye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị elu yana ezigbo ọrụ anyị na ngwa ngwa. Anyị emeela usoro QC anyị nwere ntụkwasị obi zuru oke, nke gụnyere ịzụrụ ihe, mmepụta, nyocha, na ngwugwu ngwugwu.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị maka ozi n'ọdịnihu. Gị ase ga-enwe ekele dị ukwuu site na anyị .Anyị na-ekwe gị nkwa na-aza ozugbo na asọmpi ahịa.
1.Tell us the exactly dimension and quantity you order.We make e kwuru maka gị.
2.Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, anyị na-emere gị PI. Biko kwụọ ụgwọ 30% nke ego niile na akaụntụ anyị.
(anyị Nabata T / T, Western Union, L / C, wdg)
3.Mgbe anyị natara ego 30%, anyị ga-ewepụta ngwongwo maka gị.
4. Ozugbo anyị gwụchara ngwaahịa ndị ahụ, anyị ga-ezitere gị foto iji lelee ma kwenye.
5.Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, anyị ga-eziga ibu ma nye gị otu B / L.
6.Mgbe anyị natara ego itule, anyị ga-ezitere gị B / L, ị nwere ike iburu ibu gị.
Ajụjụ: Ana m akwụ gị ego, ọ dịkwa mma?
Anyị bụ ndị a ọkachamara mba ọzọ ahia ụlọ ọrụ. Anyị na-esonye na Canton Fair kwa afọ. Ntughari bu ndu anyi. Paymentkwụ ụgwọ gị bụ 100% mma.
Q: Gịnị bụ DTEX?
A: ibu ibu nke ákwà kwa mita iri ọ bụla
Ajụjụ: Ndi ahịhịa wuru nwere ndụ dị ụkọ?
A: Ọ dị ogologo ndụ na-adịru afọ 8-10. Ahịhịa artificial bụ ngwaahịa sịntetik nke ekpughere n'èzí. Site na ọrụ UV na-eme ka ahịhịa na-emesi ndị ọrụ ike ruo afọ 8 na 10 afọ ndụ. Mmepe nke imepụta ahịhịa nke ahịhịa na-aga n'ihu na-aga n'ihu, si otú a na-enye nguzogide dị ukwuu iji eyi na ịkọwa larịị. Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ ahịhịa dị elu nke dị elu mgbe ịzụrụ.
Ajụjụ: Mmiri mmiri ọ na-amị ahịhịa?
A: Ee. N'ezie, ahịhịa ahụ emeela oghere drainage n'ụzọ pụrụ iche nke a na-etinye ebe niile na turf iji hụ na mmiri na-agbapụ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma ma ghara ịba mmiri n'elu.